Tirada abiilka ka qaadata go’aanka khasnadda ceeymiska qaranka oo kor u kacday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Anette Persson oo abiil ka qaadatay go'aankii khasnadda ceeymiska qaranku ku aqbali wayday xanuunkeeda. sawir: TT och Anna-Karin Sivberg/Sveriges Radio.
Tirada abiilka ka qaadata go’aanka khasnadda ceeymiska qaranka oo kor u kacday
La cusbooneeyay måndag 14 maj 2018 kl 12.47 La daabacay måndag 14 maj 2018 kl 11.19
Sannadkii tagay ayey qiyaastii laba jibbaarmeen tirada dadyoowga abiilka ka qaatay go’aankii xannuunkooda oo ay khasnadda ceeymiska qaranku ka gaartay.
Maxkamadda racfaanka ayey gaareen dacwooyin 5 000 kor u dhaafaya. Middaa ayaa lagu macneeyn karaa inay ugu wacan tahay shuruudaha adadag ee khasnadda ceeymiska qaranka.
Sarkaalad ka howl-gasha ciidanka ammaanka Anette Persson, qabtana cudurka marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaanno ME, ee shakhsigu uu daalan yahay abid, ayaa fahmi la’ sababta ey ugu filaan waayeen caddeeymaha kala duwan oo ay kala timid dhakhaatiir ku takhasustay.
–Waxaan dareemaa in aaney qiimeeyn farriimmaha ku qoran warqadaha dhakhaatiirta. Balse la raadiyo un hab lagu yiraahdo maya. Waayo waraaqahayga ayay ku cad yihiin xanuunka i haya, ma ahan wax la gefi karo.
Anette Persson ayaa wayday gunnadii dhaqaalaha ee xanuunka bishii juun ee sannadkii 2016. Uma aanay suurta gelin inay intaa ka badan caddeeyso awood darrida ay shaqada u leedahay. Mana ahan wax ay keli ku tahay.
Tirada dacwooyinka abiilka ee la gudbiyey ayaa kor u gaareya 5 500, waana tiradii u gu badnayd wixii ka dambeeyay sannadkii 2010.
Erik Ward, oo horay ugu howl geli jiray madaxa laanta shuruucda ee khasnadda ceeymiska qaranka waaxda Blekinge, ayaan fahansanayn sababta ay Anette Persson ku kasbatay in gunnada laga joojiyo, isagoona iminka abiilka ka caawinaya.
–Waxay soo ban dhigtay dhammaan shuruudihii looga baahnaa, mana jiraan baaritaanno intaa dhaafsii-san ee laga sameeyn karo.
Tom Aspengren, ahna xeer yaqaan ka howl gala urur daladeedka shaqaalaha ee magaciisa loo soo gaabiyo LO- TCO rättskydd. Ayaa aamin-san in khasnadda ceeymiska qaranku ku xirto shuruudo ka bax-san xeerka.
Hase yeeshee aanay middaa ku raacsanayn Cecilia Udin, isku duwaha ceeymiska xanuunka ee khasnadda ceeymiska qaran.
–Shuruudaha lama adkeeyn, hase yeeshee waxaannu sameeyney caddeeymo ka wanaag-san oo gun dhig u ah sidii loo ogolaan lahaa.
Haddaba hayadda kor-meerka ceemiska bulshada ee magaceeda loo soo gaabiyo ISF ayaa albaabka u furtay fikirka in baaris amuurtaa laga saaro iyo habka loo maareeyo howlaha noocan ah, sida ay sheegtay Catarina Eklund Ahlgren ahna ku simaha agaasimaha guud ee ISF:
-Waxay ila tahay in loo baahan yahay in eegis lagu sameeyo, waana mid aannu ku tallaabsanney inaannu eegis ku sameeyno in loo baahan yahay baaris lagu sameeyo habka khasnadda ceeymiska qaranku u maareeyso howlahaa.
-Maxay yihiin waxyaabaha aad sida qotada dheer u eegi doontaan?
-Tusaale ahaan maxey yihiin gun-dhigyada lagu shuruudeeyo. Haddii la isku xiro cadeeymo objektiv – dhexdhexaad ah si shakhsiga loogu diiwaan geliyo. Waa mid loo baahan yahay in eegis lagu sameeyo si loo arko inay caqabad ka jirto iyo baaxadda ey le ’eg tahay, sida ay sheegtay Catarina Eklund Ahlgren ahna ku simaha agaasimaha guud ee ISF.